Madaxweynaha Soomaaliya oo Rwanda uga qeybgelaya xuska xasuuqii 1994 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya oo Rwanda uga qeybgelaya xuska xasuuqii 1994
7th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Kigali – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan dalka Rwanda, isagoo halkaas uga qeybgelaya xuska murugadii xasuuqii dalkaas ka dhacay sanadkii 1994.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ah madax ka kala socota dunida oo uu casumaad rasmi ah u fidiyey madaxweynaha dalka Rwanda, Paul Kagame.
Maxaad kala socotaa xasuuqii Rwanda?
Xasuuqii 20 sano ka hor ka dhacay Rwanda wuxuu bilowday 6-dii bishii April, 1994-kii, waxaana ku dhintay ilaa 800,000 ruux, kuwaasoo intooda badan u dhashay qowmiyadda Tutiga iyo Hutuga qunyar socdka ahaa, waxaana dadkaan lagu laayey muddo ilaa 100 maalmood ah.
Dadka la laayey ee u badnaa Hutuga waxaa laayey koox mayal adag oo kazoo jeeday qowmiyadda Tutiga, kuwaasoo adeegsanayey hub kala duwan oo u badnaa baangado.
Dalka Rwanda ayaa lagu qabanayaa labo todobaad baroodiiq ah, waxaana madaxweynaha dalkaas, Paul Kagame uu shidi doonaa shumac shidnaan doona 100 maalmood, taasoo u dhiganta tirade maalmihii uu socday xasuuqa dadka badani ku dhinteen.
Xasuuqaan ayaa waxyar kadib markii madaxweynihii dalkaas ee kazoo jeeday Hutu-ga, lana oran jiray Juvenal Habyarimana lagu dilay markii diyaarad uu la socday ku dhacday caasimadda dalkaas ee Kigali.
Xasuuqii ba’naa ee lagu laayey dadkaas faraha badan ayaa joogsaday bishii July ee sanadkii 1994-kii, xilligaasoo Jabhaddii Qaranka Rwanda oo ay hogaaminayeen qowmiyadda Tutigu la wareegtay dalka Ruwanda, iyadoo kazoo gashay dhanka dalka Uganda.
Labo ka tirsan shaqaalaha Qaramada Midoobay oo lagu dilay Gaalkacyo (Faahfaahin)